यस्तो अंगमा आयुष्मानले खोपे प्रियंकाको नामको ट्याटु, देखाउँदा प्रियंका लाजले भुतुक्कै | Rajmarga
यस्तो अंगमा आयुष्मानले खोपे प्रियंकाको नामको ट्याटु, देखाउँदा प्रियंका लाजले भुतुक्कै
नायिका प्रियङ्का कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीको प्रेम । आयुष्मान देशराजका लागि आफ्नो गर्धनमा ट्याटु खोपेकी नायिका प्रियंका कार्कीको प्रेममा नायक आयुष्मानले खोपे कहाँ ? आज हामी यसै बारेमा यस भिडियो मार्फत खेलाउँदैछौँ ।
विशेषगरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमै पछिल्लो एक वर्षमा नायक आयुष्मान र नायिका प्रियङ्का कार्कीको प्रेमले निकै नै चर्चा कमाएको छ । उनीहरु मिडियामा छाइरहेका छन् र केही महिना अघिमात्रै यी दुईले इन्गेजमेन्ट पनि गरेका थिए । इन्गेजमेन्ट गरेका यी दुईले बिहे भने अर्को वर्ष मात्र गर्ने बताएका छन् । बिहे अर्को वर्ष मात्र गर्ने बताइरहेको यो जोडी चलचित्र कथा काठमाण्डुमा भने एक साथ देखिएका छन् ।
हुन त चलचित्र कथा काठमाण्डुमा यी दुईजनाको पियरिङ छैन तर यी दुई यो चलचित्रमा हुनु नै एक प्रकारको चर्चा थियो । नायिका प्रियङ्का कार्कीले कथा काठमाण्डुमा दिएको दृश्यले पनि निकै चर्चा पाइरहेको थियो ।
केही समय अघि मात्रै इन्गेजमेन्ट गरेका प्रियङ्काले आयुष्मान र आफ्नो नामलाई मिलाएर आयाङ्क बनाएकी थिइन् र आयाङ्कको नाममा उनले आफ्नो गर्धनमा ट्याटु पनि खोपेकी थिइन् । त्यस्तै अहिले नायक आयुष्मानले पनि सोही आयाङ्कको नाममा आफ्नो छाती भन्दा अलिक तल ट्याटु खोपेका छन् ।
Previous post: किन गरियो प्रख्यात चिनियाँ अभिनेत्रीलाई करोडौँ डलर जरिवाना ?
Next post: ‘प्रेमलिला’को फस्ट लुक सार्वजनिक, प्रियंका कार्कीको यस्तो रुप पनि देखियो